Global Voices teny Malagasy » Japana: Ahoana ny fahitana ny tranonkala Japoney (Fizarana fahatelo) · Global Voices teny Malagasy » Print
Japana: Ahoana ny fahitana ny tranonkala Japoney (Fizarana fahatelo)
Voadika ny 29 Mey 2018 3:31 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Tohin'ny Fizarana faharoa .
Ho ohatra amin'ireo tranonkala japoney izay tsy “mandiso fanantenana” mihitsy, bilaogera marobe no niresaka ny fahombiazan'ny tranonkala fizarana lahatsary Nico Nico Douga . Bilaogera Dan Kog niresaka momba ny tranonkalan'ny sakafo Cook Pad (izay nampahafantarina ny daholobe  herinandro vitsivitsy lasa izay) sy ny Yahoo! Japana ho ohatra mipendrapendrana.
Inona àry no manaraka?
Romeo ao amin'ny OpenMediaLaboratory  tsy nahita fahadisoanaamin'ny tondro ankehitriny:
Heveriko fa tokony ho betsaka ny ‘fahadalan'ny vahoaka’ avy amin'ny tranonkala. Tokony hanjaka kokoa ny zana-kolontsaina. Ny kolontsaina vaovao dia teraka avy amin'ny zana-kolontsaina sy ny kolontsaina ambanin'ny tany. Zava-baovao no hivoaka amin'ny fahadalana ankapobeny.
Izaho irery ve no mihevitra fa tsy misy zava-diso raha ‘mandiso fanantenana’ ny tranonkala Japoney amin'izao fotoana izao? Amin'ny tsy fahafantarana sy ny fahadisoam-panantenana bebe kokoa, hanao ny asa fanadiovan-tena ny tranonkala ary hanaisotra zavatra ho azy. Vokatr'izany dia hisy haino aman-jery hipoitra amin'ny endriny vaovao.
Ichiru ao amin'ny Kotori Piyopiyo  manamarika fa matanjaka be ao amin'ny tranonkala Anglisy koa ny zana-kolontsaina ary ny fahasamihafana dia ny maha-“olona ambony azy ireo” sy maha-“matihanina azy ireo” no ahazotoany mampiasa ny servisin-tranonkala, ary koa mampiasa vola amin'ny tranonkala, mametraka doka ary mifandray amin'ny alalan'ny bilaogy sy ny tolotra ara-tsosialy”. Manontany tena izy hoe ny tsy fahampian'ny ezaky ny sangany japoney ve no mahatonga ny “fahadisoam-panantenana” ary nanolo-kevitra hoe:
Koa … ahoana ny momba an'Atoa Umeda mampahafantatra sy manomboka tetikasa hanandratana ny tranonkala japoney? Tadiavo ireo olona ambony rehetra izay anisan'ny tafaorina ao anatin'ny tranonkala!
Mety hiresaka ny zavadrehetra ny tetikasa saingy amin'ny toerana ijoroan'Atoa Umeda amin'izao fotoana izao, mieritreritra aho fa azony atao ny manova ny sain'ireo olona mihisitrisitra handray anjara amin'ny aterineto. Amin'io lafiny io, manana fanantenana lehibe ho an'Atoa Umeda aho. Raha ny marina, dia azon'reo izay mizara ny fahatsapany fahadisoam-panantenana atomboka izany, tsy afaka manao zavatra irery izy.
Hita miharihary fa heverina ho toy ny vahiny i Umeda, araka ny fanazavana tao amin'ny lahatsoratr'i Motohiko Tokuriki rehefa nanamafy ny fanapahan-keviny hampivelatra ny ampahany amin'ny tranonkala izy.
Azontsika atao ny manohy mianatra momba ny fitantanana ny aterineto any Etazonia avy amin'Atoa Umeda, saingy mihevitra ny hoe
Inona no dikan'izany ho an'i Japana
Ny tari-dalana tokony horaisin'ny tranonkala Japoney
Ahoana ny ahafahana mampiasa ny tranonkala Japoney ho an'izao tontolo izao
Andraikitsika sy asantsika izany, toy ny olona nisafidy hiaina any Japana sy ny tranonkalany.
Nanaiky ny antsafa ho fanamby avy amin'i Umeda sy Yuka Okada mpanao gazety izy, ary manomana hetsika ankehitriny, izay nantsoina vonjimaika hoe ‘Web Innovation Summit’  mba ahafahan'ny olona mampahafantatra tolotra sy fitaovana aterineto izay hampiroborobo ny tranonkala Japoney.
Toy ny olona nampatezerina, nampalahelovana, na sahiran-tsaina noho ny lohatenin'ny antsafa, ny hany azoko atao dia ny manaporofo fa tsy izany, ary mampiseho an'izao tontolo izao amim-pahatokisana fa mahafinaritra ny tranonkala japoney.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/29/120104/
 Fizarana faharoa: https://globalvoicesonline.org/2009/07/01/japan-on-how-to-perceive-the-japanese-web-part-two/
 Dan Kog niresaka momba ny tranonkalan'ny sakafo Cook Pad : http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Kogai
 nampahafantarina ny daholobe: http://www.techcrunch.com/2009/06/12/a-recipe-site-goes-ipo-in-japan-cookpad/
 Romeo ao amin'ny OpenMediaLaboratory: http://blog.openmedialabo.net/index.php/archives/1628
 Ichiru ao amin'ny Kotori Piyopiyo: http://kotoripiyopiyo.com/2009/06/mochio20090605.html
 Motohiko Tokuriki : http://blog.tokuriki.com/2009/06/post_444.html
 izay nantsoina vonjimaika hoe : http://blog.tokuriki.com/2009/06/post_452.html